Bobi Wine oo gilgilay Museveni - BBC News Somali
Bobi Wine oo gilgilay Museveni
Image caption Bobi Wine waxaa laga soo wareejiyey gacanta milateriga waxaana la dhigay jeelka
Xildhibaanka reer Uganda ahna fannaanka heesaha pop-ka Bobi Wine ayaa maxkamad rayid ah la saaray, ayadoo lagu qaaday dacwad khiyaano qaran ah, wax yar uun ka dib markii ay sii deysay maxkamad Milatari.
Bobi Wine, oo magaciisa saxda ah uu yahay Robert Kyagulanyi, ayaa si deg deg ah dib loogu xiray isla markii la sii daayay.
Qareennadiisa ayaa sheegay in jirdil loogu geystay xabsiga dhexdiisa, arrintaasoo ay beeniyeen saraakiisha Milatariga iyo madaxweyne Yoweri Museveni.
Waxaa lala xiray in ka badan 30 ruux oo kale xilli ay isbuuci la soo dhaafay soo dhaweyd doorasho ku celis ah oo ka dhacday magaalada Arua ee ku taalla waqooyiga-galbeed ee dalka Uganda.
Xarigga loo geystay dadkaas ayaa sii xoojiyay xiisadaha ka jiray guud ahaan waddankaasi, kuwaasoo horseeday mudaharaadyo.
Image caption Wuxuu aad uga soo horjeestay in madaxweynaha uu mar kale doorasho u soo istaago
Booliska ayaa isku gadaamay guryaha ay dagganaayeen tiro siyaasiyiin ah oo ka soo jeeda garabka mucaaradka, waxayna xabsiga u taxaabeen hogaamiyaha ugu weyn mucaaradka dalkaas ee lagu magacaabo Kizza Besigye oo lagu xiray magaalada caasimadda ah ee Kampala.
Wariyaha BBC-da ee Catherine Byaruhanga oo ku sugan Uganda ayaa sheegtay in Mr Wine uusan si iskiis ah u istaagi karin, mararka qaarna la arkayay dhaawacyo ku yaalla jirkiisa.
Qareenkiisa ayaa sheegay in uu u baahnaa "daryeel caafimaad oo deg deg ah", sida lagu soo qoray wargeyska New Vision ee ka soo baxa dalkaas.
Ka dib markii uu maalmo xirnaa ayaa la fasaxay, waxaana dacwaddii ku socotay ee haysashada hubka sharci darrada ah iska laashay maxkamadda guud ee Milatariga ee fadhigeedu yahay magaalada dhanka Waqooyiga ku taalla ee Gulu.
Milatariga Uganda oo raalli gelin dhif ah ka bixiyay suxufi ay garaaceen
Hase ahaatee isla markiiba Bobi Wine ayaa loo sheegay in mar kale uusan xorriyad heysanin oo uu xiran yahay, waxaana lagu qaaday gaari ay booliska leeyihiin oo lagu geeyay maxkamad rayid ah.
Garsoorka ayaa oggolaaday in uu xabsiga booliska ku sii jiro tan iyo 30-ka bishan August, markaasoo maxkamadda dib loogu celin doono.
Waxaa jiray dibad baxyo looga soo hor jeeday xarigiisa oo ka socday dalka Uganda, halka xiddigaha dhinaca fanka ee caalamka sida Chris Martin, Damon Albarn iyo Angelique Kidjo ay ku baaqeen in la sii daayo siyaasigaas fannaanka ah.
Maalintii Salaasada, Milatariga Uganda ayaa raalli gelin ka bixiyay fal ay askartooda xilli muuqaal laga duubayay ku garaaceen wariye soo tabinayay mudaharaadyada lagu taageerayo Bobi Wine.
Image caption Xarigga Bobi Wine rabshado ayaa ka dhashay
Maxaa loo xiray Bobi Wine markii ugu horreysay?
Waxaa lagu qabtay magaalada Arua, halkaasoo madaxweyne Museveni oo xukunka heystay tan iyo 1986-kii uu ka waday olole siyaasadeed.
Masuuliyiinta laamaha ammaanka ayaa sheegay in xildhibaannada garabyada mucaaradka ay taageerayaashooda ku hogaamiyeen weerar lagu qaaday kolonyada madaxweynaha.
Waxaa goor dambe toogasho lagu dilay darawalkii Bobi Wine.
Xisbiga talada haya ayaa ku guul darreystay doorashadaas ka dhacday Arua oo uu hantay murashaxa mucaaradka ah ee uu taageersanaa Bobi Wine ee lagu magacaabo Kassiano Wadri, kaasoo isagana ay booliska gacanta ku hayaan si uu u wajaho dacwad la xiriirta Khiyaano Qaran.
Saraakiisha Amniga ayaa sheegay in hub iyo rasaas laga helay qolka uu Hoteelka ka dagganaa Bobi Wine.
Eedeymahaan ayaa si weyn loogu fahmay in ay yihiin kuwo la siyaasadeeyay oo looga gol leeyahay in lagu aamusiiyo aragtiyaha ka soo hor jeeda madaxweynaha.
Mareykanka ayaa cambaareeyay dhacdooyinka laga soo tabiyay Uganda oo uu ku tilmaamay "Arxan darro" ay ciidamada amaanka kula dhaqmeen xildhibaanno, suxufiyiin iyo dad kale.
Image caption Bobi Wine oo taageerayaashiisa salaamaya
Bobi Wine wuxuu dhashay 12-kii bishii Febraayo ee sannadkii 1982-kii wuxuuna ku dhashay degmada Gomba ee bartamaha dalka Uganda.
Waa fannaan heer sare ka gaaray heesaha loo yaqaanno Afrobeats, waxaana uu ku caan baxay inuu fankiisa diiradda ku saaro arrimaha ay ka mid yihiin Saboolnimada iyo caddaalad darrada haysata shacabka.
Fannaan inuu yahay ka sokow, sidoo kale waa jilaa sameeya filimada iyo ganacsade si iskiis ah isku maal geliyay.
Xiddigaan wuxuu waayihiisa fanka soo billaabay horraantii sannadihii 2000, wuxuuna mar kasta howshiisa ku qeexi jiray mid isugu jirta wax barasho iyo madadaalo isku mar ah.
Mid ka mid ah heesihiisii caan baxay ee ugu horreeyay, oo lagu magacaabo Kadingo waxay ku saabsaneyd nadaafadda shaqsiga.
Image caption Wuxuu mucaaradka ku taageeray diidmada qorshaha ay dawladda ku canshuurayso isticmaalka baraha bulshada
Sidee buu ku billaabay siyaasadda?
"Marka ay hogaamiyeyaasheenna noqdaan habaabiyeyaal kuwa na hagi jirayna ay jidka naga lumiyaan. Marka ay xorriyadda hadalka noqoto wax la isku bartilmaameedsado, mucaaradnimadu waxay noqoneysaa doorkeenna."
Erayadaas oo ka mid ah heesta lagu magacaabo Situka, oo micneheedu yahay "Kaca" marki laga soo fasiro luuqadda Luganda, waxaa ku luuqeeyay fannaanka reer Uganda ee siyaasiga isku baddalay ee lagu magacaabo Bobi Wine wuxuuna qaaday markii ay soo dhaweyd doorashadii 2016-ka.
Wuxuu jihada baddashay sannadkii 2017-kii ka dib markii uu dharkii fannaanimada iska bixiyay uuna ku labistay iskujoog, si uu diiradda u saaro siyaasadda Uganda.
Muddo yar ka dib Wuxuu guul taariikhi ah ka soo hooyay murashaxiin aad loo agaasimay oo kula tartamay doorasho ku celis ahayd oo ka dhacday bariga degmada Kyadondo ee bartamaha Uganda.
Doorashadaas oo ay ku hungoobeen siyaasiyiin ka kala socotay xisbiga talada haya iyo axsaabta ugu waaweyn mucaaradka ayaa xldhibaannimo loogu doortay Bobi Wine oo isagoo aan wax xisbi ah ka soconnin si madax bannaan u taagnaa.
Magaciisa ayaa si weyn u sii shaac baxay ka dib markii uu sii amba qaaday fankiisa isagoo xubin ka ah aqalka baarlamaanka.
Image caption Bobi Wine oo taageerayaashiisa ku dhex jira
Muxuu aad caan ugu yahay?
Waddanka Uganda oo dadka ku nool in ka badan afar-meelood-saddex-meel ay da'dooda ka hooseyso 30 sano ayaa u muuqda in ay la dhacsan yihiin Bobi Wine, oo ah fannaanka isku baddalay siyaasiga ee isku taagay madaxweynaha Uganda oo inta badan shacabka dalkaas ay dhasheen isagoo xilka heysta.
Mr Wine waxaa lagu qeexay in uu si buuxda u heysto taageerada dhallinyarada waddankiisa, taasoo ku dhiirri gelineysa in uu ka sii gun gaaro ujeeddooyinkiisa dhinaca siyaasadda.
Wuxuu sannadkii 2017-ki BBC-da u sheegay in uu ku haminnayay sidii uu ku noqon lahaa codka dhallinyarada. "Waxaan u taaganahay inaan kalsooni siiyo da' yarta" ayuu yiri.
Guulihii uu siyaasadda ka gaaray waxaa ka mid ahaa in 4 murashax oo uu isaga taageerayay ay ku guuleysteen doorashooyinka ku celiska ah ee kuraasta baarlamaanka.
Image caption Baarlamaanka Uganda oo gacanta isula tegey mar ay shir lahaayeen
Saameyn wax baddali karta miyuu ku leeyahay siyaasadda?
Sumcadiisa waxay ka dhigi kartaa in uu noqdo caqabadda ugu weyn ee uu madaxweyne Museveni wajahayo doorashada sannadka 2021-ka.
Wuxuu dad xuquuqda aadanaha u dooda kala qeyb qaatay mudaharaadyo looga soo hor jeeday canshuur ay dowladda ku soo rogtay dadka isticmaala baraha xiriirka bulshada, waxayna xukuumadda ku qasbeen in ay dib uga fiirsato tallaabadaas.
Bobi Wine wuxuu sidoo kale ka mid ahaa dadka sida weyn u dhaliilsan isbaddalkii lagu sameeyay dastuurka Uganda, si madaxwyne Museveni loogu sahlo in isagoo ka weyn 75 sano uu u soo istaago doorashada 2021-ka ka dhacaysa dalkaas.
Hase ahaatee is baddalkaas lagu sameeyay dastuurka ayaa markii dambe la saxiixay waxaana waddada loo furay in madaxweynaha mudadada dheer ka soo talinayay Uganda uu markii lixaad u tartamo xilka.